Tekinoroji yedu - GW Laser Technology LLC
P akatevedzana faibha laser
5M akatevedzana faibha laser
Yakawedzera fiber laser
Mhepo inotonhorera fiber laser
Vadivelu Comedy Technology News
Faster, Zvirinani, Nenjere
GW Fiber laser zvigadzirwa zvakavakirwa pa976nm pombi tekinoroji, kupenya kwakanyanya kubuda laser beam, imagetsi-optical shanduko inoshanda ≥42%, single mode fiber laser ine isingaenzaniswi mhando uye kuvimbika iyo yakanyanya kubuda simba inosvika 4KW, multimode fiber laser yakanyanya kuburitsa simba kumusoro. kusvika ku50000W iyo ine kupenya kwakakwira flat-yepamusoro danda modhi inovandudza zvakanyanya ukobvu hwesimbi sheet yekucheka kumhanya. Heano pazasi pane yedu GW Laser Tech yakazvimiririra yekuvandudza matekinoroji:
Tekinoroji yeABR inogona kucheka kwenguva yakareba uye yakakura siyana yakakwirira inoratidzira simbi zvinhu zvakaita sealuminium, ndarira, mhangura, sirivha, goridhe, girazi simbi etc. Kupfuura 6000 GW lasers
kushandira vashandisi vekupedzisira pasirese, kuratidza zvizere kuvimbika uye kufambira mberi kwehunyanzvi hweGW ABR.
Muyero wekucheka unovandudzwa zvakanyanya nekushandisa Super PulsePiercing tekinoroji, iyo isingangobvisi nguva yekumira yekubaya pepa remate, asi zvakare inovandudza kucheka kwekucheka kwakakora matel kubaya kukuru, kunoratidza zvizere mukana wehunyanzvi hweGW laser mukuchengetedza magetsi.
SMAT funcation ine-multi-protective yeLaser sosi kana ichimhanya, yakabatanidza akati wandei marudzi ema sensors, akawanda ega.kuongorora, lol kukudzora kure uye kuongorora kubva kuGW serviceteam, kuchengetedza-yemahara.
Yakavakirwa imwe 976nm pombi tekinoroji.HBF beam modhi inopa yakakwenenzverwa danda kubuda, inhanza kumhanya kwekucheka nekucheka mhando, kunyanya kune gobvu ness simbi pepa, inovandudza kucheka kana welding application kunyatsoshanda.
FRM inobuda nelaser beam, kusanganisa kusanganisa kweakakwira simba danda uye Mhete Modhi, saizi yedanda inochinjika, aslo inogutsikana senge yakaderera spatter welding, inochinjika kucheka uye zvimwe zvinodiwa zvekushandisa.